प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा के छ ? (पत्रसहित) – Akhabar Today
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)
काठमाडौं, ६ माघ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए थप कारबाही गर्ने भएकोे छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टिकरण पत्र सोमबार नै बालुवाटारमा बुझाइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘यो पत्र प्राप्त गरेको वा तपाइको निवासमा टाँस गरिएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनुहोला । यदि तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा तपाइँलाई थप कारवाही गरिने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।’